Oblak, Pogba, Wan-Bissaka, De Ligt, Pepe & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga. – Wararka Ciyaaraha Maanta
Oblak, Pogba, Wan-Bissaka, De Ligt, Pepe & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga.
June 11, 2019 kooxda Suuqa, Wararka Maanta 0
Goolhayaha Kooxda Atletico Madrid ee Jan Oblak ayaa doonaya in uu isaga tago kooxda Atletico Madrid xagaagan kuna biiro kooxda Man United ee ka ciyaarta Premier League (ESPN).
Kooxda chelsea ayaa filaysa in Muarizo Sarri loo magacaabi doono tababaraha Juventus 48 saac ee soo socda iyaga oo badalkiisa u doonaya tababarayaasha Frank Lampard, Massimiliano Allegri, Steve Holland, Erik ten Hag, Nuno Espirito Santo Iyo Javi Gracia (Express).
Man United ayaa Dhigeeda Real Madrid u sheegtay in ay iska ilowdo saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Paul Pogba Inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan (AS).
Kooxda Juventus ayaa doonaysa saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Paul Pogba waxana ay diyaar u yihiin in ay dartiis u iibiyaan 5 xiddig oo kooxda ah si ay ugu dhaqaaqaan adeegiisa (Mail).
Kooxda Man United ayaa kor u qaadi doonta dalabka ay ku doonayso saxiixa daafaca kooxda Crystal Palace ee Aaron Wan-Bissaka kadib markii laga soo diiday dalabkii hore (Evening Standard).
Man United ayaa dalabka ay ku doonayso daafaca Wan-Bissaka kor ugu qaadaysa lacag dhan 50 Milyan oo euro (Mirror).
Kooxda Sampdoria ayaa Arsenal ka soo diiday dalabkii ay ka gudbisay xiddiga daafaca ka ciyaara ee Joachim Andersen Iyo Dennis Praet iyada oo loo sheegay in ay kor ugu qaado dalabkeeda 50 milyan oo euro (Gazzetta dello Sport).
Kooxda Liverpool ayaa isaga hadhay baacsiga weeraryahanka kooxda Werder Bremen iyo xulka qaranka Germany ee Max Kruse (Liverpool Echo).
Kooxda Barcelona ayaa samayn doonta isku daygii ugu dambeeyay ee ay ku doonaysay saxiixa daafaca kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt iyaga oo wadahadalo la furay wakiilkiisa todobaadkan (ESPN).
Kooxda PSG ayaa si weyn ugu kalsoon in ay kooxaha Man United iyo Barcelona ku garaaci doonta saxiixa xiddiga daafaca ka ciyaara ee Matthijs de Ligt (Mail).
Kooxda Real Madrid ayaan u dhaqaaqi doonin saxiixyada xiddigaha khadka dhexe ee Paul Pogba Ama Christian Eriksen ilaa inta ay kooxdooda ka iibinayaan lacag dhan 150 milyan oo euro (Mail).
Kooxda Real Madrid ayaa laga yaabaa in ay amaah ku dirto xiddiga da,yarka ah ee Vinicius Jr xilli uu Zinedine Zidane diiday in uu u balan qaado boos joogo ah (Sun).
Tababaraha Kooxda chelsea ee Maurizio Sarri ayaa qorshaynaya in uu horay u sii qaato xiddigaha Gonzalo Higuain & Emerson hadii uu tababare u noqdo Juventus (Sun).
Kooxda Arsenal ayaa ku dhaw in ay 35 milyan oo euro ku hesho saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Ac Milan ee Franck Kessie (Sun).
Kooxda Man City ayaa da,yarka Joao Felix u soo bandhigtay 100 kun oo Gini todobaadkii iyo heshiis 5 sano ah hadii uu ku biiro (Sun).
Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Arsenal ee Granit Xhaka ayaa beeniyay wararka la xiriirinaya in uu isaga tagayo Arsenal isaga oo sheegay in uu ku faraxsan yahay Arsenal (Star).
Man United ayaa diyaar u ah in ay la kulanto dalabka 62 milyan ah ee ay man City ka gudbisay xiddiga khadka dhexe ee kooxda Atletico Madrid ee Rodri (Star).
Kooxda Liverpool ayaa ugu horaysa tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Lille ee Nicolas Pepe (Mirror).
Kooxda Chelsea ayaa dalab 62 milyan oo euro ah ka gudbisay xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Valencia ee Goncalo Guedes laakiin heshiiska ayaa ku xidhan in laga qaado ganaaxa labada suuq ah (Express).
Kooxda Liverpool ayaa heshiis cusub ka saxiixatay xiddiga da,yarka ah ee Sheyi Ojo kadib heshiis amaah ah ugu diri doonta kooxda Rangers xilli ciyaareedka dambe (Express).
Kooxda Tottenham ayaa iska diiday fursad ay xagaagan kula saxiixan karto weeraryahanka kooxda Roma ee Edin Dzeko (Star).
Kooxda Barcelona ayaa doonaysa saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Sevilla ee Wissam Ben Yedder kaas oo xaqiijiyay in uu isaga tagayo kooxda Sevilla xagaagan (Mirror).